Lucky wena - usumtholile umuntu amazing othanda of movie, has a umuzwa omkhulu amahlaya, futhi ithanda izilwane. Uma Uphelelwa usuku ebusuku imibono futhi baye ukulihlola zonke ukuvakasha romantic, kungani ungazindli iqale kwabaswele ezinye njengoba umbhangqwana, ikakhulukazi uma nifaka ukuzilibazisa osuvele ukujabulela? Nanka amasu ngezindlela ungasiza out, konke ngosizo umlingani wakho:
1.) Photography: zokukhosela Ukweqa futhi ukuhlenga kaningi badinga usizo izinga akhombise izithombe zezilwane zabo ezikhona ukutholwa. Ingabe wena noma umlingani wakho master of Instagram, noma ingabe athande ukuchaza ins kanye nasemigwaqweni of beso? Lokhu kungaba ngumuntu okwaziyo esikhulu ngawe, futhi kalula umehluko isibalo izilwane kokuba ngibe nabazali bokutholwa. Xhumana yokukhosela yakho ukuze ubone uma ungakwazi ukunikeza amasevisi zakho, futhi wabelane labo ubuso cute zingosi ukuze uthole kubo amakhaya.
2.) Cleaning: Sick of the imfuhlumfuhlu? Kulula kanjalo buthelela izinto eziningi kakhulu njengendoda nenkosikazi, ngakho thatha ithuba ukuhlanza indlu kanye nokuhlinzeka izinto ezidingekayo ukuze zokukhosela zendawo kanye ukuhlenga. amathawula, zokulala, amaphephandaba, izitsha, placemats, futhi abaningi bakwazi konke singaba usizo la maqembu. Banike ucingo, futhi sibone ukuthi yini abakudingayo. Uzoba sibasiza izimpahla ngenkathi ekwenzeni ikhaya lakho ahlelekile.
3.) Ukupheka: Ukuphuca ukuphuma inyama kanye / noma isilwane imikhiqizo Liven up ukudla kwakho ndawonye. Jay-Z kanye Beyonce Kwaba kusukile lokho, kungani wena? Vegan kanye imifino livele izitsha zakho ozithandayo engenza pizza ebusuku zithakazelisa kakhulu, futhi lokhu yokuphila usuthathelwa flavour Culinary omusha and yokudlela ezamehlela. Do it for the izilwane, impilo yakho, noma nje ukuze nifaka umkhiqizo more ku sokudla akho. Noma kunjalo, kungcono kuzuzisa - futhi esihlwabusayo!
4.) Travel: Ingabe nobabili sithanda ukushaya umgwaqo? Ohamba ohlwini lwakho isifiso, kodwa wena kubonakale tenteke? zokukhosela Abaningi futhi ukuhlenga kudingeka uyisa kwezindawo zawo kanye nezinye ukuhlenga noma nasemakhaya okutholwa. Uma uya out of town vele, noma uma ngifuna ukubona enye ingxenye state, ukunikela ukuthutha isilwane, ngisho uma nje ingxenye indlela.
5.) Arts and Crafts: Uma nobabili kwenzeke ukuthanda amaphrojekthi DIY (ukunakekelwa bonke abathandi Pinterest and guys ngamathuluzi,) ke lokhu kuwumsebenzi fun ngawe. With a izintwana ezimbalwa futhi abanye bebambisene, ungakwazi kalula ukwakha abandayo sezulu zokukhosela noma inja izindlu izilwane ezingondingasithebeni endaweni yakini. Lokhu kubuye nokuvivinywa okukhulu kakhulu ukuba nobuhlobo, sifana Ikea ukuthenga. Uma zombili bayazithanda ezobuciko, ukudala ezinye izingcezu ndawonye banikele ukuba i nzuzo isilwane ukuze endalini off noma usebenzise ukuqwashisa.
6.) Computers: Uma ungumuntu tech-savvy, sipho ukusiza ukuhlenga noma zokukhosela nge lewebhu yabo design noma izingosi zokuxhumana nabantu. Uma blog, bhala ezinye izihloko ngalezi imithombo umphakathi, noma ukuba baqale blogs eyabo.
7.) Endawonye: Ngisebenza emakhaya asebekhulile in Kentucky, futhi angikwazi ukuniqinisekisa ukuthi iningi lezakhamuzi musa uthole izivakashi eziningi. Uma une isilwane ine ubuntu esifanele salokhu line umsebenzi, ukukhuluma eqenjini therapy isilwane ukuqala inqubo kokuthola isilwane sakho isilungele wokuzithandela. Sonke siyazi yeka indlela okududuza ukuxhumana isilwane, kungani unganikeli ukuthi othile udinga induduzo? Cabanga enikeza zalezi zinkonzo futhi lokho ezifuywayo udlame zokukhosela, kids ekungeyona, futhi ezibhedlela iziguli, too. Ungacabangi kuphela amakati nezinja benze lo msebenzi, noma! Sengike ngakubona Bunnies, izingulube, ngisho izimfudu konke ukwenza ingxenye yabo!
8.) Sports: Uma and sweetheart bakho nimthanda ukuhlala asebenzayo, cabanga kuhlelembisa iqhaza a 5K ukuqwashisa nesihluku ezilwaneni, noma zinikeza ukuhamba izinja emcimbini zokutholwa wendawo. Mhlawumbe ngisho kubamba puppy "uhlanga" noma kitten Superbowl ukuze bazuze wangakini Humane Society. Uzoba ukusiza izinhlangano zosizo emizamweni yabo ngenkathi ukuzijabulisa, futhi lokho win-win.
9.) Ukuhlala e: Animal yethu zokukhosela agcwele izinja namakati ukuthi kudingeka phakade amakhaya, kanye namaqembu ukutakula Kuyaphuthuma lakhutsata lezi zilwane ukuze kuvinjelwe enqubweni. Uma ungumuntu sekhaya futhi babe isikhala extra kuphocelela isilwane okwesikhashana, xhumana isilwane sakho zokukhosela lendawo kanye namaqembu zokutakula. Yini engcono ukwedlula ukonga impilo futhi ukuthola ukudlala nomngani omusha ubuka?
Jabulela lezi ukuzilibazisa zokuphana njengoba umbhangqwana, futhi wazi ukuthi ndawonye ubhekene ukwenza umehluko ezimpilweni izilwane abakuzungezile.
"Ngiyakuthanda", zimbalwa ezinye imisho ehlanzekile nomnqopho njengeyabo nalena njengoba. Lezi ezintathu ...